Vaovao - Misy banga ny fanjifana tavoahangy ranom-boankazo eto an-toerana sy any ivelany, ary manana hoavy mamirapiratra ny indostria
Tavoahangy menaka tena ilaina
tavoahangy Cream Glass
tavoahangy lotion fitaratra
tavoahangy famafazana vera
Tavoahangy sakafo vera
Tavoahangy misy zava-manitra
Tavoahangy vera menaka oliva
Siny fitaratra ho an'ny ronono
tavoahangy medikaly fitaratra
tavoahangy fitaratra Boston
Vokatra fitaratra ho an'ny haingon-trano
Tavoahangy vazy fitaratra
Tavoahangy divay vera
Tavoahangy zava-pisotro misy alikaola
Tavoahangy zava-pisotro misy vera
tavoahangy labiera vera
Tavoahangy fitaratra fonosana Hemp
Loha famafazana plastika
Misy elanelana eo amin'ny fanjifana tavoahangy ranom-boankazo eto an-toerana sy any ivelany, ary manana hoavy mamirapiratra ny indostria
Ny tavoahangy fitaratra dia fitahirizana tavoahangy misy ranom-boankazo nentim-paharazana any Shina, ary ny fitaratra koa dia fitaovana famonosana ara-tantara.Rehefa mirotsaka eny an-tsena ny karazana fitaovana famonosana maro, dia mbola mitana toerana manan-danja amin'ny famonosana zava-pisotro ny fitoeran-jiro, izay tsy azo sarahina amin'ny toetran'ny fonosana izay tsy azo soloina fitaovana fonosana hafa.
Misy tombony roa farafahakeliny amin'ny fampiasana tavoahangy fitaratra:
1, Mitsitsy loharanon-karena, mampihena ny loto ary miaro ny tontolo iainana.Ny tavoahangy plastika azo ampiasaina dia mamokatra loto fotsy be dia be ary misy fiantraikany amin'ny tontolo iainana;Ny tavoahangy fitaratra dia hafa.Azo averina averina izy ireo raha mbola tsy simba.Izy ireo no fitaovana ronono tena ilaina amin'ny tontolo iainana.
2, Mampihena ny vidin'ny vokatra izany ary manome tombony ho an'ny mpanjifa.Manodidina ny 20% amin'ny vidin'ny famokarana ny tavoahangy vita amin'ny ronono, raha toa ka ambany dia ambany ny vidin'ny fanodinana tavoahangy fitaratra.Ny fanoloana tavoahangy plastika amin'ny tavoahangy fitaratra no fomba ara-toekarena indrindra.
Avy amin'ny fomba fijerin'ny tsena iraisam-pirenena, tavoahangy sy vera vokatra, toy ny fanohanana tavoahangy fonosana ho an'ny sakafo, zava-pisotro, fanafody, indostria simika isan'andro, kolontsaina sy ny fanabeazana, fikarohana siantifika sy ny indostria sy ny sampan-draharaha, dia tena ilaina fonosana fitoeran-javatra amin'ny sehatra lehibe sy malalaka. fanjifana.Na izany aza, misy elanelana lehibe eo amin'i Shina sy ny fanjifana tavoahangy fonosana iraisam-pirenena isan'olona.Na dia mahatratra 13,2 tapitrisa taonina aza ny fitambaran’ny vokatra amin’ny taona 2010, dia mbola misy elanelana kely amin’ny fanjifana iraisam-pirenena.Noho izany, ny tavoahangy ranom-boankazo sy ny vokatra vita amin'ny vera dia manana fanantenana fampandrosoana lehibe, arahin'ny fivoaran'ny indostrian'ny milina tavoahangy fitaratra isan'andro.
Miaraka amin'ny fivoaran'ny indostrian'ny vokatra tavoahangy ranom-boankazo, ny orinasa fitaratra dia hivoatra tsikelikely amin'ny fomba famokarana vondrona ary hamorona fahaiza-mamokatra lehibe.Ny tsipika famokarana vondrona folo sy vondrona mihoatra ny folo amin'ny milina fanaovana tavoahangy mitete roa miaraka amin'ny fanaraha-maso ara-potoana elektronika dia hiatrika fitakiana tsena lehibe kokoa.
Fotoana fandefasana: Jan-04-2022
Mapo Industrial Park, Mapo Town, Tongshan County, Xuzhou, Jiangsu, Sina
Ny dividends nentin'ny vera kely b...
Vinavina ny tsenan'ny tavoahangy vera manomboka amin'ny 2022...
Misy banga amin'ny tavoahangy ranom-boankazo misy ...
Ny fiakaran'ny vidin'ny famokarana dia mametraka ny pres...
Karazana tavoahangy inona no ampiasaina amin'ny...
© Copyright - 2011-2021 : Zo rehetra voatokana.
Tavoahangy Saosy Glass Bbq, siny fitaratra ho an`ny ranom-boankazo, tavoahangy diffuser volotara, tavoahangy vera labiera, zava-pisotro misy tavoahangy vera, tavoahangy ranom-boankazo,